Dowladda oo sheegtay in ay soo dhaweeneyso wada-hadalada Maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo sheegtay in ay soo dhaweeneyso wada-hadalada Maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna
MAREEG 8 January 2016 8 January 2016
Muqdisho (Mareeg)—Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya, Cabdisalaan Axmed Caato ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay taageereyso wada hadalo u soconaya Maamulada Galmudug iyo kan Ahlu Sunna.
Cabdisalaan Axmed Caato, Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya ayaa tilmaamay wada hadaladan ay garwadeen ka tahay Dowladda Soomaaliya oo gacan ka heleysa Urur Goboleedka IGAD.
Mr. Cabdisalaan Axmed Caato oo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu tibaaxay in Dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay wax-walba oo lagu xalin karo khilaafka u dhaxeeya Maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna.
Afhayeenka Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhinca kale waxuu sheegay in Dowladda ay aqoonsan taha Maamul Goboleedyada Dalka balse waxuu ugu baaqay Madaxda Maamuladaasi xalinta cabashada ka soo yeereysa Degaanada Maamuladaasi.
Sikastaba, Hadalkan ayuu ka sheegay Afhayeenka Xukuumadda Shir xasaasi ahaa oo Shalay Golaha Wasiirada Xuukuumadda Soomaaliya ay ku yeesheen Magaalada Muqdisho.